Igumbi elinye, indawo eThulekileyo, kufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseStansted - I-Airbnb
Igumbi elinye, indawo eThulekileyo, kufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseStansted
Stocking Pelham, Buntingford , Hertfordshire, United Kingdom
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJuliette
Ipropathi ikwilali ezolileyo engaphezulu nje kweemayile ezili-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseStansted (kude ngokwaneleyo ukuba ungaphazanyiswa kukuhamba kwenqwelomoya) kwaye ifanelekile ekujongeni iSaffron Walden, iAudley End kunye neCambridge. Kukho unxibelelwano lukaloliwe olukhawulezayo oluya eLondon ngeBishops Stortford, emi kumgama nje oziikhilomitha ezisibhozo.
Ipropathi ixhamla kwindawo yokupaka ezitalatweni, ngokhetho oluhle lwee-pubs zelali kunye nevenkile enkulu yasekhaya kumgama nje omfutshane wokuhamba.
Igumbi lifakelwe umgangatho wefanitshala yepine yelizwe ukubandakanya iyunithi yokuzoba yewadi, idesika/iyunithi yamampunge kunye nebhedi enomtsalane yompayina enye enomandlalo we-hypnos wokuqinisekisa ukulala kakuhle ebusuku. Kukho ne-smart TV ene-WIFI ukwenzela ukuba ube lula.
Igumbi lifanelekile kumntu omnye.
Wamkelekile ukuba uzincede utye i-cereal kunye ne-toast kusasa kunye neti kunye nekofu ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho i-oveni/i-microwave ukwenzela ukuba ube lula kunye negumbi lesidlo sakusasa / igumbi lokutyela apho ungatyela khona ukutya kwakho.
Ndihlala ekhaya rhoqo, ndisebenza kwindawo yam encinci yokusebenzela ecaleni kwendlu, ndisenza isepha eyenziwe ngesandla! Ngaphandle kwam, kukho inene elichwepheshile elihlala kwelinye lamagumbi okulala ubusuku obubini ngeveki.
Ipropathi ijikelezwe ngamaphandle amahle anohambo lwelizwe oluhle kunye nee-pubs zelali umgama omfutshane wokuhamba.
Abatyeleli banokufuna isithuthi sabo njengoko kukho inkonzo yoluntu enqongopheleyo kule lali.
Indawo yokupaka ngaphandle kwesitrato, ifunyenwe ngaphambili kwipropathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Juliette
Polite, friendly, sociable, dividual